अभिनेत्री लिली Zhurkina: जीवनी, Filmography, मृत्यु को कारण
उनको व्यक्ति वरिपरि सधैं अफवाहहरु र अनुमान धेरै थिए। उनको सौन्दर्य र आकर्षण बस स्वर्गीय थिए फिलिम र थिएटर अभिनेत्री लिली Zhurkina रूसी, Sofi Loren थियो। त्यो एक कठिन भाग्य लागि भण्डारमा थियो: त्यो आफ्नो पेशा लागि मांग घमण्ड गर्न सकिएन, र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा twists र distortions भयो छ। अहिलेसम्म प्रसिद्ध litsedeya एव्जेनी Evstigneev संग familiarity आपसमा प्रेम इच्छुक अभिनेत्री लागि घातक छ, सँगै जीवनको कठिनाइ र समस्याहरूको सबै हटाउन थियो। लिली Zhurkina जीवनको प्रमुख मृत्यु, र त सानो एक बायाँ - छोरी Masha, आफ्नो प्रसिद्ध आमाबाबुको काम जारी गर्ने। Olympus कपट उनको बाटो के थियो र किन त्यो पूरै पूर्वजन्ममा को कला आफूलाई महसुस गर्न सक्षम थियो? थप विवरण यस प्रश्नको विचार गर्नुहोस्।
लिली Zhurkina को सोभियत संघ को राजधानी मा जन्म भएको थियो अक्टोबर 12, 1937। नियमित विद्यालयमा शिक्षकको रूपमा काम गर्ने, र उनको मनपर्ने बच्चा कहिल्यै चलचित्र हुनेछ भनेर मान्छु सकेन केटी आमा।
र साँच्चै आफ्नो युवा मा लिली पेसा पाइलटहरूले को सपना देख्यो। त्यो बस लाग्यो Marinu Raskovu त्यो विमान को कर्ण मा बस्न सम्म बढ्न कि सपना र लिडिया Litvyak। तर, केटी प्रतीक्षा फरक भाग्य हो।
उच्च स्कूल पछि, लिली Zhurkina आफ्नो आमा एक पेशा रोज्ने निर्णय, र प्राथमिक विद्यालय शिक्षकको हुन अध्ययन गर्न आए। स्नातक पछि, त्यो एक शिक्षकको रूपमा काम गर्न थालिन्। केही बहिष्करण संग पसलमा यसको समकक्ष जवान विशेषज्ञ उपचार। यो तिनीहरूले विशाल आवाज केटी र सिद्ध कमर को बस डाह छन् सम्भव छ। एउटा तरिका वा अर्को, तर आफ्नो जीवन स्कूल मा लिली Zhurkina शिक्षण समर्पित केही वर्ष, तर एक समय अझै यो उनको बाटो थियो भनेर बुझे पछि।
"ठूलो" संग बैठक
एक पटक त्यो गल्ति फ्रान्सेली को प्रसिद्ध अभिनेता र संगीतकार संग मास्को मा मुठभेड़ों चार्ल्स Aznavour।
आफ्नो बैठक Maestro को प्रदर्शन को शुरुवात अघि छिट्टै स्थान लियो। तारा गीत तुरुन्तै कन्सर्ट मा शिक्षक निमन्त्रणा, र केही समय उनको उसलाई भोजन पछि निमन्त्रणा। प्रसिद्ध litsedeya र संग बैठक पेशा को अगाडी विकल्प निर्धारित।
केटी एक अभिनेत्री बन्न निर्णय र मास्को कला थियेटर स्कूल प्रवेश।
1962 मा, लिली Zhurkina, जीवनी रोचक र उल्लेखनीय तथ्य धेरै जसमा, को नाटकीय संस्था माथिको एक स्नातक बन्नेछ। "समकालीन" - केही समय पछि, यो Melpômene को प्रसिद्ध मन्दिरको कम्पनी मा enlisted छ।
उनको भविष्य पति संग जानकारी
जहाँ त्यो अब महत अभिनेता एव्जेनी Evstigneev संग पूरा हुनेछ यो छ। उहाँले युवा सौंदर्य द्वारा मोहित भएको थियो, र त्यो आफ्नो खल्ती मा टिप्पणी, प्रेम को जसमा एक घोषणा वरिपरि बार लाउनु गर्न थाले।
सभाहरूमा Evgeniy Aleksandrovich troupe विशेष लिली पछि सब र बिस्तारै उनको घाँटी उडायो। त्यसैले त्यो स्पष्ट उहाँले तिनलाई indifferent छ गरे।
रोमन अझै पनि विकास ...
पहिलो, तर, यो अझै पनि गाह्रो भएको नवोदित अभिनेत्री लिली Zhurkina आफूलाई साथ Evstigneev बस्नेछन् भनेर विश्वास थियो। ती दुवै पहिले नै विवाह गरेर जडान गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई। एव्जेनी Alexandrovich को "समकालीन" सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्याङ्कले एक थियो जो मास्को कला थियेटर Galina Volchek, एक स्नातक स्कूल विवाह भएको थियो। निस्सन्देह, छेउमा सम्बन्ध भएको Yevstigneyeva लागि घातक हुन सक्छ: अभिनेता को troupe कुनै स्थान, उहाँले हात थियो जो Galina सिर्जना हुनेथियो।
यो नि: शुल्क र लिली Zhurkina जसको व्यक्तिगत जीवन त्यतिबेला त्यहाँ राम्रो थियो थिएन। पतिको एक प्रतिभाशाली मूर्ति रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने ओलेग Ikonnikov थियो। उहाँले आफ्नो पत्नी प्रेम र साथ भागमा चाहनुहुन्छ कहिल्यै हुनेछ।
तर Evstigneev र Zhurkina बीच रोमान्स अझै भयो।
को "समकालीन" troupe साराटोभ गए भएपछि, फिलिम को शूटिंग मा "पुल निर्माण"। यो यूजीन र लिली को यो प्रान्तीय शहर एक पैदल लागि गए र पूर्ण सबै बिर्सनुभएको छ छ ...
राजद्रोहको पति सिकें र Volchek। "पुल निर्माण" चित्र को फिलिम समयमा त्यो उहाँले आफ्नो सम्बन्ध हस्तक्षेप छैन भनेर लिली बताए। तर मूर्ति Ikonnikov सुन्दर लिली को जान छैन। धेरै प्रयास भएको छोडपत्र गरिएका छन्। केही समय Zhurkina Evstigneev विवाह पछि र प्ले, पाठ्यक्रम, कि पछि अभिनेत्री को "समकालीन" मा रहन सकेन। जवान मानिसहरू आफ्नै घरमा छैन र litsedeya त्यसपछि जीवित, एक भाडामा घर मा लक्षविना हिड्नु बाध्य भए व्लादिमीर Soshalskaya, अभिनेता ओलेग Tabakov। केवल एक समय पछि, तिनीहरूले अलग रहन ठाउँ पायो।
समय मा सम्बन्ध Yevstigneyeva Zhurkina कि प्रबल र, परिवार idyll, फीका गर्न सुरु गर्नुहोस्। Evgeniy Aleksandrovich शायद काम बिना रहन: निर्देशक उसलाई भूमिका प्रदान गर्न खुसी छन्। तर आफ्नो नयाँ पत्नी शायद यो भन्दा Evstigneev साथ फ्रेम मा, चलचित्रमा देखा पर्नुभयो। यसको दावी प्रासंगिक तस्बिरहरू भन्दा अधिक। तथापि, अभिनेत्री Liliey Zhurkinoy केही चलचित्रहरू अहिलेसम्म राष्ट्रिय खजाना Cinématographe साथ दिए। यो, विशेष, "शानदार Berendeev" (आई एस्केन्सन, 1975), "पुरानो नयाँ वर्ष" (एन Ardashnikov, O. Efremov, 1980), "थप प्रेम, थप आशा" (एन जस्ता चलचित्रहरू एक प्रश्न छ Lyrchikov, 1984)। Filmography अभिनेत्री चलचित्र बारे 17 भूमिकाको छ।
निस्सन्देह, उनले सेट मा काम को एक सानो बिट थियो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्न सकेन। त्यो उठ्न थाले श्रीमान्सँगै तर्क। लिली आफ्नो छोरी Masha को दर्दनाक जन्म विचार गर्दा खलबलिएको। सात वर्ष मा त्यो कहिले काँही मात्र टिभी स्क्रिनमा देखिने, मातृत्व प्रक्रिया मा टाउको प्रवेश थियो।
Evgeniy Aleksandrovich छोड्न, "समकालीन" र मास्को कला थियेटर ओलेग Efremov प्रविष्ट निर्णय गर्दा, उहाँले काम गर्न अनुरोध पतिको थिए हुनेछ। तर डाक्टर चाँडै Lilii Zhurkinoy neuralgia निदान र चरण बाटो उनको बन्द गरिनेछ। माग कमी अभिनय लागि यो एक वास्तविक झटका हुनेछ। प्रेस अभिनेत्री नै त्यो पेशा को डाह थियो जसलाई उनको पति, अलग्गै, रक्सी आशक्त भनेर लेख्छन्। समय यसलाई bygone सौन्दर्य फीका, र रोग मात्र उनको मानसिक अवस्था exacerbate हुनेछ। पत्रकार को Lilia Zhurkina (अभिनेत्री) पतिको पुग्यो जो ख्याति र सफलता, को डाह थियो लेख्न थाले। तथापि, Evgeniy Aleksandrovich को आलोचनाएँ कुनै पनि ध्यान र पत्नी podkovyrkoy थिएन। त्यो पनि अविश्वासी Yevstigneev र पनि अधिक छ कि अफवाहहरु पुग्न थाल्नुअघि "उनको आत्मा अन्तर्गत तोड्न।"
निस्सन्देह, Evstigneev पत्नी रोग हटाउन मदत गर्न हरेक प्रयास गरेको छ।
अभिनेता, अस्पताल उनको लिए पनि psychics गर्न गरिएका, तर सबै व्यर्थ थियो। यूजीन Alexandrovich को पत्नी मृत्यु 1986 को गर्मी मा। त्यो मा गाडे मा Kuntsevo चिहान राजधानी। एउटा तरिका वा अर्को, तर धेरै दर्शकहरु अझै पनि यस लिली Zhurkina सम्झना। के मा अभिनेत्री मृत्यु को कारण? यो प्रश्न अब पूर्ण बुझे छैन: अगाडि एक अलग संस्करण राखे। रक्सी र रोग लत को परिणाम हो - केही पत्नी Yevstigneyeva को प्रारम्भिक मृत्यु भन्छन्। अरूलाई किनभने अभिनय पेशा मा मांग को कमी को धेरै चिन्तित थियो लिली, जीवनको प्रमुख मृत्यु भन्छन्। तर, यो एक्कासी बितिसकेका किन Lilia Zhurkina बारेमा सबै अफवाहहरु छ। मृत्युको कारण - आत्महत्या। एक राय पनि छ, तर जहाँसम्म यो सत्य हो रूपमा - अज्ञात छ।
कला रोचक कुरा गोली मार। Teylor एलन: एक जीवनी र कलात्मक योग्य
अभिनेता ब्राड Dourif: जीवनी, फोटो। शीर्ष चलचित्र
Godfathers - जो यस्तो छ?
आफ्नो हातमा एक म्यारोमीटर कसरी बनाउने
स्याटलाइट टोनर: छनौट र समीक्षाका लागि सुझावहरू
रत्तीएको ocelot - "Maynkraft" मा एक बिरालो कसरी बनाउने
सेन्ट अलेक्जेन्डर Nevsky। Aleksandra Nevskogo को प्रतिमा। हस्तलिखित अर्थोडक्स प्रतीक
टर्की राष्ट्रिय पोशाक के हो?